Shirkii Golaha Wasiirada Puntland oo ka hadlay Amniga iyo Safarkii Gaas – Radio Daljir
Shirkii Golaha Wasiirada Puntland oo ka hadlay Amniga iyo Safarkii Gaas
Luulyo 26, 2018 5:29 g 0
Shirkii Golaha Xukuumadda Dawladda Puntland oo uu Shir-guddoominayey Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr: Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa looga hadlay arrimaha kala ah amniga dalka, safarkii Madaxweynaha ee Yurub, xeerka cilmiga denbiyada Iyo warbixino kale.
Xaaladda Amniga Dalka.
Golaha Xukuumada Dawladda Puntland oo warbixin ka dhegaystay Wasaaradda Amniga ayaa sheegay in guud ahaan xaalada dalku xasiloon tahay, isla markaana ay Dowladdu si dhow ula socoto dhaq-dhaqaaqyada fuleynimada ah ee ay wadaan nabadiidka isbahaystay.
Golaha Xukuumadda Dawladda Puntland oo ku dheeraaday amniga dalka ayaa faray shacabka Puntland inay garab siiyaan ciidama qalabka sida ee u taagan xoreynta xuduudaha dastuuriga ah iyo xasilinta nabad gelyada guud, gaar ahaan magaalo madaxda.
Safarkii Madaxweynaha ee Yurub.
Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr: Cabdiwali Maxamed Cali Gaas ayaa uga warbixiyey Golaha Xukuumadda shirkii hormarinta Soomaaliya ee Yurub, Madaxweynaha ayaa sheegay inuu shirku guul ku soo dhammaaday loogana wada hadlay arrimaha amniga, dhaqaalaha iyo siyaasada Soomaaliya, Sidoo kale Madaxweynaha ayaa sheegay inuu kulamo wax ku ool ah la qaatay qurbajoogta Puntland gaar ahaan Jaaliyadaha Yurub iyo Kenya iyo daneeyayasha Puntland.
Ansixin: Xeerka Cilmiga Danbiyada.
Golaha Xukuumada Dawladda Puntland ayaa dood dheer kadib ansixiyey xeerka Cilmiga Danbiyada, xeerkaan oo ay soo diyaarisay Hay’adda Cilmiga Danbiyada (The Bureau of Forensic Science) ayaa qeexaya habka cadeynta danbiilaha qarsoon, sheyga la adeegsaday, goobta iyo goorta falku dhacay, cilmigaan bulshada loogu adeegayo oo dalku baahiweyn u qabay ayey Golaha Xukuumaddu faalo dheer kadib meel mariyen.
Ugu-danbeyn golaha Xukuumaddda Dawladda Puntland ayaa warbixin ka dhegaystay Guddiga Shilalka Gaadiidka iyo Khasaaraha ka dhasha oo ku howlanaa wax ka qabashada shilalka kadhasha habka isu-socodka dalka.
Goloaha Wasiirrada Oo Ansixiyay Qorshe Lagu Sugayo Ammaanka Caasimadda